China Truck Side Mirror PK9592 Mpanamboatra sy mpamatsy | Tetezana Andrefana
Fitaratry ny kamiao PK9470
Taratry ny fitaratra ho an'ny kamio PK9583
Fiara an-tsoratry ny kamiao PK9780
Fiara fitateran'ny kamiao PK9883
Fiara fitateran'ny kamiao PK9849
Fiara fitateran'ny kamiao PK9823
Fiara fitateran'ny kamiao PK9822
Fiara fitateran'ny kamiao PK9810
Fiara fitateran'ny kamiao PK9592
Fiara fitateran'ny kamiao PK9590
PK9592 dia mety amin'ny Hino dutro, Toyota ary maro ny teknolojia manerantany .Niorina chrome ny teknolojia ambonin'ilay fitaratra, izay afaka misoroka tsara ny famirapiratanana ary hahatonga ny mpamily hahatsapa ho mahazo aina. 100% Vaovao sy avo lenta. Ny mpamatsy antsika dia tsy maintsy ISO9001 mahay. Ny ankamaroan'izy ireo dia mpamokatra mahay TS16949.
* Mombamomba ny vokatra
PK9592 dia mety amin'ny Hino dutro, Toyota ary maro ny teknolojia manerantany .Niorina chrome ny teknolojia ambonin'ilay fitaratra, izay afaka misoroka tsara ny famirapiratanana ary hahatonga ny mpamily hahatsapa ho mahazo aina. 100% Vaovao sy avo lenta. Ny mpamatsy antsika dia tsy maintsy ISO9001 mahay. Ny ankamaroan'izy ireo dia mpamokatra mahay TS16949. Vita mba hanome taratra / fahitana tsara kokoa. Mety amin'ny fampiasana mpamily. Ny tarehy Convex ho an'ny fijerena midadasika kokoa dia manatsara ny fiarovana. Manana ny mari-pahaizana momba ny CE sy ISO9001: 2008 izahay hiantohana ny kalitaon'ny vokatray. kalitao, vidin'ny fifaninanana, tolotra tso-po no nahazo ny fiderana an'ny mpampiasa, malaza be eo amin'ny tsena. Tanjon'ny orinasa ny manome vokatra tsara sy feno, ahafahanao mividy fampisehoana tokana amin'ny vokatrao, mitahiry ny vidin'ny entana, mitahiry anao sarobidy kokoa fotoana! Orinasa sy orinasa maro eto an-toerana sy avy any ivelany hametrahana fifandraisana maharitra sy maharitra amin'ny fiaraha-miasa mba hiantohana ny kalitaon'ny famatsian-toerana mora vidy. Ny vokatray dia aondrana any Rosia, ny Repoblika Tseky, Torkia, Alemana ary ireo firenena eropeana atsinanana hafa, ary koa any Azia atsimo atsinanana, firenena afrikanina.
FAMPIHARANA Hino dutro, Toyota ary maro manerantany
* Maninona no mifidy anay
* Amin'ny alalànay, mety ho hitanao daholo ireo kojakoja fitondra entana izay ilainao
* Mandefa ny baiko rehetra avy hatrany izahay amin'ny fotoana ilana azy.
* Manondrana ny faritra misy anay erak'izao tontolo izao izahay.
* Ny baiko rehetra dia feno madio sy tsara
* Fizarana kalitao misy serivisy matihanina amin'ny vidin'ny mifaninana
* Manam-pahaizana SWB amin'ny sehatry ny kamiao sy bus ary ny kalitao miorina.
* Hamaly anao izahay amin'ny fanontanianao ao anatin'ny 24 ora.
* Manaja ny mpanjifa rehetra amin'ny maha sakaizanay izahay ary manao raharaham-barotra amin-kitsimpo ary manao namana amin'izy ireo, na avy aiza na avy aiza.
* Kalitao voalohany, serivisy avo indrindra, serivisy faran'izay tsara ary, mpanjifa afa-po
* Ny serivisinay
Ny tanjonay voalohany dia ny hanomezana fahafaham-po ny fangatahan'ny mpanjifa ary manolotra azy ireo vokatra avo lenta ho an'ny vidiny mifaninana indrindra.
Ho an'izany, ny famokarana ataontsika dia mivoatra hatrany mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fenitra kalitao fa manatsara ihany koa ny lozisialy sy ny rojo famatsiana.
Aorian'ny fandefasana dia hanaraka ireo vokatra ho anao indray mandeha isaky ny roa andro izahay, mandra-pahazoanao ireo vokatra. Rehefa nahazo ny entana ianao dia andramo, ary omeo hevitra aho.Raha manana fanontaniana momba ny olana ianao, mifandraisa aminay, dia hanolotra ny fomba famahana ho anao izahay.
* Fonosana sy fitaterana
Ny fonosana matihanina indrindra eto amintsika, amin'ny lafiny voalohany, kitapo bubble aloha, fonosana misy baoritra. fonosinay anaty boaty fotsy sy baoritra volontsôkôlà ny entanay. Raha manana patanty voasoratra ara-dalàna ianao dia afaka manangona entana ao anaty boaty misy marika izahay aorian'ny nahazoana ireo taratasy fanomezandàlana anao.
Fitaterana kamio lehibe mankany amin'ny seranan-tsambo
Fiaraha-miasa eo amin'ny fitaterana iraisam-pirenena
Amin'ny alàlan'ny mpandefa hafatra, toy ny DHL 、 UPS 、 FEDEX sns. Isam-baravarana izany, matetika 3-7 andro fiasana ho tonga.
Amin'ny alàlan'ny rivotra mankany amin'ny seranan-tsambo, matetika 7-12 andro vao tonga.
Amin'ny alàlan'ny ranomasina mankany amin'ny seranana an-dranomasina, matetika 25-40work andro ho avy.
Teo aloha: Fiara fitateran'ny kamiao PK9590
Manaraka: Fiara fitateran'ny kamiao PK9810
Fiara fitateran'ny kamiao PK9506
Fiara fitateran'ny kamiao PK9512
Tratry ny fitaratry ny kamio PK9468
Misorata anarana amin'ny buletinay mba hijanona ho vaovao hatrany miaraka amin'ny fanentanana, fihenam-bidy, varotra ary tolotra manokana
Manampia: 10F, Wanjia Plaza, Jingao Rd 377, Shanghai, PRC